Hazelnuts. ewusizo kakhulu, futhi ukuze kujabule yona, ngokuphelele linesizotha
Ezikhathini zasendulo, lokhu isihlahla kuchasiselwe izakhiwo ngokuyisimangaliso. Wasiza abantu bathole ingcebo, ukuqeda izifo eziningi futhi imise umlilo. Kwakuthiwa njengoba okuphe impilo entsha. Ochwepheshe bathi zonke lezi izakhiwo hazelnuts got ngenjongo ecashile. Ezinsukwini ubudala, lapho abantu ngayifunda kwesivuno okubi, abaningi baye bafaka lezi ukudla okunomsoco zekusasa futhi ebusika sibonga sasivumela eqotho kubo. Ngisho ezikhathini zanamuhla ezithandwayo ahlale hazelnuts.
On insimu yezwe lethu elikhulu isakazeke ehlathini. Ngo inkomishi nenhle kakhulu amahlamvu kusukela izingcezu eziningana ahlelwe izithelo. IMisa amavithamini, izakhi trace nezinye izinto eziwusizo ukuze umzimba womuntu liqukethe hazelnut. Hazel njengoba edume ngokuthi, liwumkhiqizo bomdabu Russian. Long njengoba, ngiphakamisa obhasikidi, wonke umkhaya waya iqoqo wakhe.
Lokhu izihlahlana kungaba ngempela high futhi sifinyelele ukuphakama kwamamitha emine kuya kwemihlanu. Kukhona izinhlobonhlobo eziningi, kodwa izithelo zihlale ezifanayo izakhiwo yabo, simnandi, okunempilo futhi unempilo. Hazelnuts aqukethe amaningi, uwoyela sucrose. Ngo cortex, utshwala kuyinto Njengamanje, tannins kanye namafutha abalulekile. Abantu abaningi abathanda ushokoledi, amaswidi kanye halva kusukela lesi sidlo okumnandi. Kodwa akubona bonke abantu uyazi ukuthi lo mkhiqizo kuyasiza ukwandisa inani ubisi e nabancelisayo, kuthuthukisa igazi futhi usiza ukwelapha isifo sokulahlekelwa igazi. Lokhu okunama-kilojoule amaningi futhi kakhulu wamaprotheni amaningi umkhiqizo, ngakho-ke ilungele emumva ukuhlinza kanye nezifo ezihlukahlukene sina.
Ngokumangalisayo, esinye linesizotha iningi lezihlahla ezikhona yokutshala ku emagcekeni abo nje hazelnut. Hazel frost ukumelana ukwazi ukumelana namazinga okubanda afinyelela omubi ngisho kuze kube degrees, anamanci mahlanu. Akesabi kwanoma iyiphi nezilokazane nezifo, kodwa idinga kuphela nenhlabathi aqukethe lime, umquba, usemanzi, loamy noma loam sandy. Lokhu isiko kakhulu kabi ukubekezelela nesomiso, futhi nenhlabathi ukukhanya kakhulu noma esinda kakhulu futhi obukhulu, kahle umswakama permeable futhi emoyeni.
Ukutshalwa hazelnuts - hhayi kakhulu isikhathi esiningi inqubo, kodwa uma wazi imithetho embalwa eyisisekelo, ke iyokulethela kuphela injabulo, futhi izithelo ngokushesha, esihlwabusayo kakhulu kuqala. Lapho uthenga ukhethe abangaphezu kweminyaka engu-izithombo ezimbili. Kuyinto efiselekayo ukuthi isitshalo wayeneminyaka emine ubudala nokuningi ke kungenzeka ngokushesha balukhulume. Abalimi abanolwazi ukuncoma ukuthola izihlahla eziningana izinhlobo ezahlukene, ukuze kangcono uMhloli Wemiqulu. Ukutshala hazelnuts ekwindla, ngo-Okthoba noma Novemba.
Okokuqala sidinga ukuba ukhethe indawo umhlaba. Bush kudinga endaweni ubuncane square metres ezine, ungakhohlwa ukuthi maduze zikhule bese namandla. Maphakathi ingxenye uswebezane eyabelwe kancane kahle ezijulile nobude ingqikithi impande utshale. Qiniseka ukuthi nginqume ingxenye yayo aboveground, kuze kuphele isikhathi ubusika akudingekile, futhi impande kuyoba lula ukuthola ukusizakala. isikhathi Okubalulekile zalisa. Zithukulule umhlaba futhi asuse bonke ukhula. On yonke indawo, futhi ikakhulukazi chitha impande indawo amakhilogremu okungenani amabili humus, ezomile umquba, futhi ekuqaleni kuka-May, qiniseka athambise umhlabathi bese wengeza akukho engaphezu kwekhulu amagremu nitrophosphate, futhi urea.
Phakathi yokukhula kuyadingeka zalisa nezihlahla kabili - entwasahlobo and ekwindla. Ngo ekwindla, ungakwazi ukuthenga ngomumo eyenziwe i-nitrogen khulula Umanyolo, futhi zisebenza ngesilinganiso angamakhulu amabili alungele amagremu amakhulu amabili namashumi ayisihlanu ehlathini ngalinye. Ukuze sokuvuna wayenothile ngempela, hazelnut ukutshalwa kuzomele sifake sishaye esiyisibopho ukukhula evuselela ngaphambi nangemva zom. Abalimi ukutusa ukusetshenziswa okunjalo evuselela zemvelo ezifana "ihlumela" futhi "amandla." Sishaye Kwenziwa kanye njalo emavikini amabili kanye iphela isivuno wokugcina emva kokuvuna.
Ochwepheshe bathi iningi nuts ewusizo - labo waklebhula, bahlanza futhi idliwe ngosuku olufanayo. Ngaphandle containment, balahlekelwa eziningi izakhiwo zalo nenzuzo, ngakho okungcono kungaba nut, kwanda engadini yabo engadini.
Ukuqhakaza ubuhle ebusika - tsiklomeniya. Imbali: ukugcinwa kanye nezici ukutshala ekhaya
Anabel - hydrangea kubo bonke izingadi. Ukutshala Hydrangea Annabelle nokunakekela
Emhlophe: imbali. Igumbi Garnet: ukutshala nokunakekela
Volleyball umdlali Sabina Altynbekova: Biography, empilweni yakho, izimpumelelo
Neuralgia trigeminal: ukwelashwa udokotela ekhetha
Indlela yokukhetha ephephile? Uhlolojikelele lweMakethe kanye Namacebiso Ochwepheshe
Indlela ukulungiselela so- kuvuma Christian
Area umbala amashubhu - ikakhulukazi etafuleni kanye nezincomo
Indlela futhi bazishaye isifuba ngokuthi MTS